आँप होइन, बिष खादै छौ !! पढेर सबैले शेयर गरौ - IAUA
आँप होइन, बिष खादै छौ !! पढेर सबैले शेयर गरौ
ramkrishna May 27, 2019
अचेल वजारमा पाइने आँपहरु अप्राकृतिक रुपले रसायनको प्रयोग द्वारा पकाएर विक्रिको लागी राख्ने गरिन्छ । आँपलाइ चाडो पकाउन क्याल्सीयम कार्बाइडजस्ता अखाद्य रसायन राखी पकाउनाले अमृत फललाई विषमा परिवर्तन गराई दिन्छ । कार्बाइड नामक रसायन काचो आँपमा राख्नाले २४ घण्टामा आँप पाक्दछ । जसले ब्यापारीलाई फाइदा त हुन्छ तर उपभोक्ताको स्वास्थमा नकारात्मक असार पुग्न जान्छ ।
कार्बाइड नामक रसायन राखेको आँप खादा पेट दुख्ने, वान्ताहुने देखि लिएर फोक्सो, मुटु, मृगौलामा समेत ठूलो असर पार्दछ । गर्ववती महिलाले यस्तो आँप खादा गर्भ तुहिने र क्याक्सर समेत हुने संम्भावना धेरै हुन्छ । कार्बाइडले शरिरमा भएको पानीसंग प्रतिक्रिया गरी एक प्रकारको क्षार बनाउछ । जसले श्वासनली, घाटी, आँखा र छालामा धेरैखालको समस्या ल्याउन सक्छन । यसले आँखापोल्ने, पाक्ने, रोगसुरु गर्दै आँखाको शक्तिनै गुमाइदिन सक्छ । भारतमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ३५% क्याल्सियम कार्बाइड भएको हावामा २५ सेकेण्ड मात्र बस्दापनि असर देखाउछ । एक मिनेट बस्दा संक्रमण गर्दछ भने ५ मिनेट बस्दा विहोस बनाउछ र मृत्यु समेत गराउने सर्वेक्षणको रिपोर्ट छ । मुसामा गरिएको त्यस प्रकारको अनुसन्धानले कार्बाइडको सेवनले फोक्सो र मृगौलामा धेरै असर पारेको देखाइएको छ ।
Previous Previous post: Nepal bhasha
Next Next post: संसारको सबै भन्दा धनी मान्छे को हुन् र के गर्छन् ?